My World: အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေဆီ … အိုဘားမားရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုသည်
အာရပ်ကမ္ဘာလို့ပြောလိုက်ပါလား။
အဲလိုခြုံပြောလို့ မရဘူးလေ၊ အာရပ်ကမ္ဘာထဲမှာက တိုင်းပြည်တွေ ၂၁တောင်ပါတယ်။ သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းက အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းပြည်တွေလောက်ပဲ။ တိုက်ရိုက်ပြန်ရတာမို့ ကိုယ်လိုသလိုဆွဲရေးလို့မရပါဘူး။ ဘာကြောင့် အာရပ်ကမ္ဘာလို့ရေးလိုက်ပါလား လို့ ပြောရတာလဲ မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူး
ဒီမှာက အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံဆိုတာ The Middle East isaregion that encompasses Western Asia and North Africa. It is often used asasynonym for Near East, in opposition to Far East. The corresponding adjective is Middle-Eastern and the derived noun is Middle-Easterner.
The Arab world (Arabic: العالم العربي‎ al-ʿālam al-ʿarabī ) refers to Arabic-speaking countries stretching from the Atlantic Ocean in the west to the Arabian Sea in the east, and from the Mediterranean Sea in the north to the Horn of Africa and the Indian Ocean in the southeast.
It consists of 21 countries and territories withacombined population of 360 million people straddling North Africa and Western Asia.